Muuqaal sawirqaade ah iyo tirooyin aan suurtagal ahayn - Sawirrada Paradoxa
Tirooyinka aan macquul ahayn
Waxyaabo halkaa ku socdey?
Dheecaan dheeraad ah
Bogagga rinjiga ayaa ah dhacdo weyn oo loogu talagalay carruurta da 'kastaba leh. Boggayaga internetka waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo kala duwan oo ku saabsan mawduucyo kala duwan: Sawirrada sawirada maskaxeed iyo sidoo kale tirooyin aan suurtogal ahayn, oo loo yaqaan "paradoxes", waxay xiiseeyaan ilmo kasta.
Xeeladaha fekerka ah iyo tirooyinka aan macquul ahayn
Waxyaabaha indho-indheynta - illusions
Fikradaha fekerka ah waxay tilmaamayaan dhammaan dhinacyada bini'aadamka beenta ah sida aragtida wadajirka ah.
Tani waxay dhici kartaa, hal dhinac, marka aynu aragga si ka duwan u aragno waxa ay dhab ahaantii ku marayaan hab gaar ah oo matalaya.
Ama dadka kala duwan ee isku qaabka ah waxay aqoonsadaan waxyaabo kale ama waxyaallaha ayaa loo soo jiidan karaa si aanay marnaba u dhici karin jawiga aadka u yaqaanna maskaxdeenna waa ay wareersan yihiin.
Ku raaxeyso xayawaanka nalalka ah. Riix linkiga si aad u tagto bogga leh template u dhiganta:
Khadkee ayaa ka dheer?
Waa ay ka dheer tahay kuwa kale?
Wareega goobtu waa weyn tahay
Is barbardhig ama qalloocan?
Malaha aragti ahaaneed
Isbarbardhig ama qaldan
Is barbardhig ama maahan?
Isku xirida bogga isbeddelka bogga leh qaabka ku habboon:
Meelaha ama weelka
Saddex ama afar baarar?
Muuqaal ficil ah - maxaad aragtaa?
Jaranjarrooyinka aan macquul ahayn
Wareeg aan aheyn
Tirada aan la isku haleyn karin
Sawirada hoose, waxaa had iyo jeer u muuqda inuu yahay wax dhaqaaqaya, si dhow u eeg! Riix sawirada si aad u ballaadhiso sawirada:
Wareegyadani way socdaan .... ma
Haddii mid ka mid ah arkaan sawirkan si qoto dheer leh, aragtida aadanaha waxay kasbashaa qaababka wareega wareega. Dabcan, waxba kama taro sawirkaan!
Mar labaad, maskaxdeenu waxa ay naga ciyaaraan khiyaano nala xiriirinaya indhahayaga: malab-macquul-ahaanshaha wuxuu ka kooban yahay xeelad malaynaya qaabka.
Kanisza Square - Eegida wax aan jirin
Inkasta oo aanu rumaysanahay in ay aad u caddaato indhahayaga: ma jiraan wax xuduud ah oo dhexda u dhexeeya, maskaxdeena dhismaha sawirka eegaya qaababka caanka ah. Xaaladahan waxaa loo yaqaan "Kanisza Square".
Taasina waa qalad gebi ahaanba?
Dhab ahaantii? U aamina ama ha'aha, khadadka iskutallaabta ah waa kuwo isku mid ah. Waad cabbiri kartaa tan ama, adiga oo diirada saaraya laba xariiq oo kala duwan, waxaad arki kartaa in dhammaan khadadka ay yihiin kuwo barbar socda.
Malaha fekerka ee dadka waaweyn
Caruurtu waxay arkaan waxyaabo aan ka duwaneyn dadka badankooda ...
Tirada aan la garan karin - saddexagal
Tirada aan macquul ahayn - goobaab
Tirada aan la isku haleyn karin - jaranjaro